Ungayisusa kanjani imodi yokulinda ye-TV 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Labo abavame ukubukela i-TV ekhaya ngokuqinisekile baqaphele ukuthi ngemuva kwesikhathi esithile ngaphandle kokusebenza, i-TV iyacima bese iya kumodi yokulinda, kube sengathi sicindezele inkinobho ebomvu kurimothi. Lapho lokhu kwenzeka akufanele singethuki futhi sicabange ukuthi ithelevishini yephukile: kuyindlela yokuziphatha ejwayelekile, eyenzelwe abakhiqizi be-TV ukonga amandla lapho i-TV ishiywe ngaphandle kokuthi kube khona umuntu oguqula iziteshi noma owenza noma yimuphi omunye umsebenzi isikhathi eside (imvamisa ngemuva kwamahora ama-2).
Uma singakuthandi lokhu kuziphatha noma sifuna ukubuka i-TV engapheli ngisho nangaphezulu kwamahora ama-3, kulo mhlahlandlela sizokubonisa uyisusa kanjani imodi yokulinda ku-TV wezimpawu ezinkulu ze-TV, ukuze ukwazi ukulawula ngokushesha imodi yokulinda ezenzakalelayo ezimweni ezithile noma ezimeni ezithile lapho kudingeka khona i-TV ehlala njalo (ngokwesibonelo, i-TV esitolo, i-TV egcina inkampani yenkampani). umuntu omdala noma ingane).
Ungayenza kanjani ingasebenzi imodi yokulinda ku-TV
Njengoba kushiwo ekubukeni kuqala, isici sokuma okuzenzakalelayo sinikezwa kuwo wonke ama-TV anamuhla nakuma-TV ahlakaniphile ukwenza kube lula ukonga amandla uma ushiywe isikhathi eside ngaphandle kokusebenzisana. Noma kunjalo, umkhiqizi ngamunye unikeza ithuba lokulungisa lo msebenzi (ukwandisa isikhathi sokulinda) futhi by cisha ngokuphelele, ukuze ukwazi ukujabulela i-TV engenamkhawulo. Kulokhu kokugcina, noma kunjalo, kungakuhle ukuthi ukhumbule ukuyicisha ngezikhathi ezithile ngerimothi, ukonga amandla nokwelula impilo yokusebenziseka kwalowo osebenzayo.
Susa i-LG TV kumodi yokulinda
Uma sine-LG smart TV singasusa imodi yokulinda ezenzakalelayo ngokucindezela inkinobho yegiya kurimothi, kuyisa kwimenyu Zonke izilungiselelo, khetha imenyu General bese ekugcineni ucindezela into I-Temporizador.
Ewindini elisha elivulayo, senza kungasebenzi into Aukuvala ngemuva kwamahora ama-2 ngokuchofoza kuyo futhi, uma ngabe sisethe isibali sikhathi sokuvala esihlukile, sibheka kwimenyu Isikhathi esivaliwe, uqinisekisa ukuthi into isethelwe ku Yenza kungasebenzi. Ngenye indlela, futhi singaqinisekisa izwi Imodi ye-Eco (ekhona kwimenyu Generaluma izwi lisebenza Ukuvalwa okuzenzakalelayo, ukuze ukwazi ukuyicisha.
Susa i-Samsung TV kokubekwe eceleni
Ama-TV e-Samsung athandwa kakhulu futhi abasebenzisi abaningi bazobona okungenani kanye uma imodi yokulinda ezenzakalelayo isebenza. Uma uphakathi kwalabo abafuna ukuyenza ingasebenzi, singaqhubeka ngokucindezela inkinobho Imenyu yesilawuli kude, esiholela phansi ngomgwaqo Okujwayelekile -> Ukuphathwa Kwesistimu -> Isikhathi -> Isikhathi Sokulala nokubheka ukuthi ngabe into Yezilungiselelo ikhutshaziwe (kufanele isethwe kumahora ama-2 ngokuzenzakalela: masishintshe izilungiselelo zibe VALIWE).
Uma le ndlela engenhla ingasebenzi, sidinga ukubheka ukuthi isilawuli sokubekwe eceleni siyatholakala yini kumasethingi wokonga amandla. Ukuqhubeka sivula ifayela le- Imenyuake siyingenise Isixazululo esiluhlaza noma ku Okuvamile -> Isixazululo semvelo bese uhlola ukuthi izwi liyasebenza yini Ukuvalwa okuzenzakalelayo, ukuze ikhutshazwe unomphela.
Beka i-Sony TV ngaphandle kwemodi yokulinda
Ama-TV akwaSony angaba nakho kokubili uhlelo lokuphathelene nokuphathelene ne-Android TV entsha: zombili lezi zinhlelo zonga amandla futhi ziya ngokuzenzakalela kokubekwe eceleni ngemuva kwesikhathi esithile ngaphandle kokufaka. Ukwenza kungasebenzi ukusebenza kokubekwe eceleni kuma-Sony TVs ngaphandle kwe-Android TV, vele ucindezele inkinobho ethi Ikhaya / Imenyu kurimothi, ake sithathe umgwaqo Amasethingi Esistimu -> Eco bese ubheka ukuthi ukuma kwe-TV okungenzi lutho kuyasebenza yini, ukuze sikwazi ukukukhubaza.
Uma sinethelevishini yakwaSony ene-Android TV, sicindezela inkinobho Casaake sithathe umgwaqo Amasethingi -> Amandla -> Eco bese ucisha imodi yokulinda. Uma kungasebenzi noma isikrini sicisha futhi ngemuva kwesikhathi esithile kuzofanele futhi sihlole ukumiswa kwe- Uyaphupha, isici se-Android esibonisa isilondolozi sesikrini uma kungasebenzi isikhathi eside. Ukuqhubeka, ake sithathe umgwaqo Amasethingi -> i-TV -> iphupho futhi uqiniseke ukuthi eduze kwento Lapho ukwimodi yokulala izwi likhona Mayo.
Amanye ama-TV e-Sony smart akwanamuhla nawo anenzwa yokubona, ethola ubukhona babantu phambi kwe-TV futhi, uma kwenzeka kubhekwa isheke elibi, ngokuzenzekelayo ibeka i-TV kumodi yokulinda. Lesi sici sokuqhekeka komhlaba sisengakhubazeka ngokucindezela inkinobho yeMenyu, usihambise endleleni. Amasethingi -> Amasethingi Esistimu -> I-Eco -> Inzwa Yobukhona bese usetha into VALIWE.
Susa iPhilips TV kokubekwe eceleni
Ama-Philips TV angafaka futhi uhlelo olusebenzayo lobunikazi noma i-Android TV, ngakho-ke kuzofanele siqhubeke ngokuhlukile. Kulabo abane-Philips TV ngaphandle kwe-Android TV, kungenzeka ukukhansela imodi yokulinda ngokucindezela inkinobho Imenyu / Ikhaya kurimothi, uvula imenyu Okukhethekile O General, ngokucindezela phezulu I-Temporizador futhi ekugcineni ukuvula umnyango Susa, lapho kuzofanele silungiselele khona umsebenzi VALIWE.
Uma iPhilips TV yintsha, singasusa imodi yokulinda ngokucindezela inkinobho Imenyu, usihola ngomgwaqo Amasethingi -> Amasethingi Eco -> Isikhathi Sokulala bese usetha isibali sikhathi 0 (iqanda).
Susa iPanasonic TV kumodi yokulinda
Uma sine-Panasonic TV ecisha kuphela ngemuva kwesikhathi esithile, singayilungisa ngokucindezela inkinobho I-Temporizador (ikhona ezinhlobonhlobo eziningi zezilawuli kude zePanasonic) futhi, kumenyu entsha ezovuleka, konke okumele sikwenze kungasebenzi into Ukubamba okuzenzakalelayo.
Ingabe ayikho inkinobho yesibali sikhathi kusilawuli kude sethu se-Panasonic TV? Kulokhu singasusa okubekwe eceleni ngokulandela inqubo yakudala, equkethe ukucindezela inkinobho Imenyu kurimothi, vula imenyu ye-Timer bese usetha u-Auto Power Off kuyo VALIWE noma yakhe 0 (zero)
Uma ukulinda kwe-TV kusihlupha ngenkathi sibuka i-movie ende enhle noma ngesikhathi sokuzitika kakhulu (okungukuthi, lapho sibuka iziqephu eziningi zochungechunge lwe-TV ngokuqhubekayo), ukukhubaza imodi yokulinda kungaba yisixazululo esisebenzayo. ngakho-ke akudingeki uthinte irimothi. okungenani kanye ngehora ukuze ithelevishini "iqonde" ukuthi sikhona nokuthi kukhona esikubukayo. Ngenxa yalo mhlahlandlela singakwazi cisha okubekwe eceleni kumathelevishini yemikhiqizo eyinhloko, kepha izinyathelo esikukhombise zona ingadlalwa kunoma iyiphi i-TV yanamuhlaKuzofanele sithathe irimothi kuphela, sifake amasethingi bese sihlola into ngayinye ephathelene nokuvalwa okuzenzakalelayo kwethelevishini: Okubekwe eceleni, ukonga amandla, i-Eco, i-Eco Mode noma i-Timer.
Izinqubo eziningi zokubekwa eceleni ziyashintsha kuye ngohlelo lokusebenza olufakiwe; Ukuqonda ngokushesha ukuthi yiluphi uhlelo esinalo phambili nokuthi uqhubeke kanjani, sincoma ukuthi nawe ufunde imihlahlandlela yethu Ungazi kanjani ukuthi ngabe iyi-Smart TV mi I-Smart TV ehamba phambili ye-Samsung, Sony ne-LG App System.
Ngabe sinezinkinga ngemodi yokulinda noma ukuvala i-PC? Kulokhu, siphakamisa ukuthi ujulise ingxoxo ngokufunda i-athikili yethu. Ukumiswa kanye nokuchitheka kwekhompyutha: umehluko nokusetshenziswa.